विराटनगर, १३ भदौ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कोरोना भाइरसका संक्रमित एक वृद्ध पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
सिरहाको भदैया घर भएका ८४ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा शुक्रबारराति ११ः२० बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए । मृतकमा अत्याधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि वृद्धलाई उपचारका लागि भदौ ६ गते धरान ल्याइएको थियो । कोरोनाको आशंकामा स्वाबको पीसीआर परीक्षण गराउँदा भोलिपल्ट रिपोर्ट पोजेटिभ आएको डा. सापकोटाको भनाइ छ । त्यसपछि वृद्धलाई उपचारका लागि कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
मृतकमा मृगौला सम्बन्धी पुरानै समस्या रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । डा. सापकोटाले शव व्यवस्थापन नियमानुसार नै हुने जानकारी दिए ।